Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Yemen - Awdinle Online
Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Yemen
Muhaajiriin Soomaali dhaawac ah oo lagu daaweynayo Isbitaalo ku yaallo caasimadda Yemen ee Sanca.
Ilaa 30 qof ayaa ku geeriyootay, in ka badan 30-kalena wey ku dhaawacmeen dab Axadii la soo dhaafay qabsaday Xarun lagu hayo dadka Muhaajiriinta oo ku taalla caasimadda dalka Yemen ee Sanca.
Ma kala cadda waxa sababay dabkaasi, balse, waxaa la sheegay inay Kooxda Xuutiyiinta ay xilli habeen wada aaseen Muhaajiriinta ku dhintay dhacdadaasi.
Mid ka mid ah Qaxootiga Soomaalida ee ka badbaaday
masiibadaasi ayaa sheegay inay 460 Qaxooti isugu jirtay Ethiopian iyo Somali lag hayey Xaruntaasi oo hoos tagto Hay’adda Socdaalka Yemen.
Waxa uu intaasi ku daray inay Maleeshiyadda Xuutiyiinta diideen in la booqdo Muhaajiriinta Soomaalida iyo kuwa Ethiopianka ee dhaawacmay, kuwaasi oo lagu daaweynayo Isbitaalladda Al-jamhuuri iyo Al-thawra ee ku yaalla magaalladda Sanca.
Qaxootiga Soomaalida waxa kale oo uu faahfaahin ka bixiyey dhacdadaasi, wuxuuna tilmaamay inuu dabku kacay, kadib, markii ay Muhaajiriinta dhowr maalmood.
“Taliye ka tirsan Kooxda Xuutiyiinta ayaa soo galay Xarunta Muhaajiriinta lagu hayey, wuxuuna amar ku bixiyey inay joojiyaan cunto-ka-soomida ama la dili doono” ayuu yiri Qaxootiga Soomaalida, oo intaasi ku daray markii uu Taliyahaasi weeraray Muhaajiriinta inay taasi keentay inay muhaajiriinta is-difaacaan, ilaa uu Taliyihii ka geeriyoodo.
Maleeshiyadda Xuutiyiinta oo ka fal-celinayey dilkaasi waxay Gasoline (Bansiin) ku bilbileen Xarunta Muhaajiriinta lag hayo, waxayna Bam ku tureen Xaruntaasi, taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawacyo soo gaartay Muhaajiriinta.
Sida laga soo xigtay Olivia Headon oo ka tirsan Xafiiska Hay’adda QM ee Muhaajiriinta (IOM) ee magaalladda Sanca waxay sheegtay in tirada Muhaajiriinta ee ku geeriyootay dabka ka kacay Xarunta Muhaajiriinta lagu hayo inay gaarayaan 30-qof.
Previous articleMaamul Goboleedka ugu horeeya ee la geynayo tallaalka Coronavirus oo la shaaciyay
Next articleKenya oo ka baaqsatay dhageysiga dacwadda Badda & hal arrin ay qaaday